Dhaxalkii Askariga! Qaybtii Afraad | Somaliland Post
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland oo Hanjabaad u jeediyey Maayerka Boorama
Masuuliyiinta Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo Kulan la Qaadatay 6…
Shirka Golaha Wasiirrada oo Xeerar lagu Ansixiyey iyo Xeerka Baananka oo…
Maxkamadda Sare ee Somaliland oo laashay Dacwad ka dhan Golaha Guurtida…
Home Maqaallo Dhaxalkii Askariga! Qaybtii Afraad
Dhaxalkii Askariga! Qaybtii Afraad
Qaybtii saddexaad waxa ay inoo joogtay reer Libya oo kacdoon kaga hor-yimid taliskii Mucammar Al-Qaddaafi, qaybtanna halkii ayaa ay ka shidaal qaadan doontaa.
Inkasta oo ay yaab iyo af kala qaad ku noqotay Qaddaafi dhacadadani, oo aanu kaba filaynba in ay shacbigiisu ku kici doonaan (quudhsi awgii ma uu rumaysnayn rabitaanka shacbigiisa), hadana markii ay dani u run sheegtay, waxa ay ku kalliftay in uu adeegsado xoog iyo xeelad wixii uu hayey, si uu u joojiyo kacdoonkaas. Tusaale ahaan, sida uu shacbigiisa u quudhsanayey waxa ku tusaya: kadib markii uu kacdoonku bilaabmay, ayaa waxa uu Qaddaafi ku sheegay dadkii kacdoonka waday in ay yihiin “Khamriiyaal, ajaanib iyo qaar dalkooga khiyaamay”. Kadib markii uu xaalku adkaaday, Qaddaafi waxa uu adeegsaday awooddii ciidankiisa oo aanu waxba la hadhin, waxa uu soo kiraystay calooshooda u shaqaysteyaal shisheeye ah, kuwaasi oo iyagana uu u soo diyaarsaday xasuuqa shacbigiisa, halkaasi oo ay si weyn uga soo if-baxday damiir xumada iyo axmaqnimada Qaddaafi. Inkasta oo aan la difiri karin in ay faro-gelin shisheeye qayb ku lahayd kacdoonkii Libya, hadana waxa sida weyn kacdoonkan u caawiyey waxa ay ahayd arxan darradii Qaddaafi.
Kadib markii uu kacdoonkii isku bedalay gacan ka hadal, ayaa waxa ay labadii dhinac ee iska soo hor-jeeday dagaallameen muddo bilo ah, kadibna waxa dagaalkaas si toos ah u soo galay diyaaradaha gaashaan buurta NATO, kuwaas oo duqeeyey fadhiisimihii ciidamdii Mucammar Al-Qaddaafi, isla markaana daciifiyey awooddiisii Millatari. Ugu dambayntii, bishii August ee sannadkii 2011-kii ayaa ay mucaaridku qabsadeen magaalo madaxdii dalka Libya ee Tripoli, waxaana ay baacsadeen Qaddaafi iyo kooxihii daacadda u ahaa ee ka bar-bar dagaallamayey. Geba-gabadii, sida la sheegay, Qaddaafi oo la socda kolonyo baabuur ah ayaa ay weerareen ciidamadii cirka ee dalka Faransiisku, kuwaasi oo ku dhaawacay halkaasi, ugu dambayntiina ay kooxaha mucaaridka ahi gacanta ku dhigeen Mucammar Al-Qaddaafi oo dhaawac ah, halkaasna ay ku dileen taariikhdu markii ay ahayd October 20, 2011-kii. Halkaasna waxa ku soo gebo-gabawday noloshii kaligii-taliyaha!
Dalkii waxa uu kaga tegay bur-bur, dadkii waxa uu kaga tegay khilaaf, dawladnimadii waxa uu kaga tegay baaba’, waxaana uu god madaw ku riday wada-noolaanshihii, is jacaylkii iyo wada-jirkii umadda reer Libya, waxa uu u loogay cadaw shisheeye iyo mid sokeeyaba, waxaana uu dalkii ku jiraa xaalad fawdo ah il-bidhiqsiyada aan maqaalnkan qorayo. Waxaa bilaabmatay qoxoontinimo, gaajo iyo macalluul, dagaal iyo xabad, iyo boqollaal dhibaato oo aan la soo koobi karin. Wax kale iska dhaaf, oo Mucammar Al-Qaddaafi waxa uu burbur u soo jiiday magaaladii uu ku dhashay ee Sirte, taasi oo ku taalla koonfurta dalka Libya. Markii la dilay, waxa magaaladaasi ka dhacay bur-bur ay dhulka la gashay, qoxoonti iyo baro-kac laxaad leh. Kaasina waa dhaxal kale oo askariga laga helo! Allahayow isku ekaa dhaxalka askartani!
Mar hadii aynu isla garanay in aan askariga hoog mooyee hagaag laga dhaxlin, bur-bur mooyee badhaadhe laga dhaxlin, maxaa laga filan karaa, askariga musharraxa madaxweyne looga dhigay xisbiga Kulmiye, hadii uu hogaaminta dalka ku guulaysto. Inkasta oo aanan dafirsanayn muhiimadda iyo qiimaha uu askarigu u leeyahay bulshada, iyo abaalka uu mudanyahay in loo gudo, hadana markan waxa aan ka hadlayaa waa marka askariga loo dhiibo talo ummadeed iyo hogaaminta dawladnimo, ee laga kaxeeyo shaqadiisa u gaarka ah ee uu u diyaarsanyahay. Ugu horrayn, bal aan soo qaato erayo uu leeyahay abwaanka Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdullaahi Singub, erayadaas oo ku jira tixdiisa“Daacad” waxa uu ku yidhi mar uu ka hadlayey bal in askari lagu aamini karo talo ummadeed:
Weligii ma daahiro askari, waa damiin falane
Waanuu kaba ducaystaa qofkii, diinta caabudaye
Dunidu maamul uma dhiibatiyo, meel dad joogaba’e
Dibadaa la geeyaa cidlaa, lagu dugaalaaye
Darbi adag hadaan lagu xannibin, daaha soo furaye
Xakamaa dalqaha loo dhigaa, lagu daweeyaaye
Wuxuu dallaayad ugu boodayaa, waa dagaal gala’e
In la dilo, inuu dilaa, loo diyaarsadaye
Mana dallaco hadaan faraha, dhiig uga danuunayne
Daacadow hadaad aragto, waa inaydun diidaan
Hadii ay noqoto xeelad dagaal iyo xaalad colaadeed, Muuse Biixi waa nin si fudud uga dabbaalan karaya, isla markaana ka soo qayb qaatay dagaallo waaweyn oo dalka hore u soo maray. Muuse Biixi waa geesi goobaha dagaalka caan ka ah, kaasi oo aanu wadnihiisu galawda aqoon, naftiisuna aanay dib u gurashada baran. Waa halyey markii ay xaaladu adkaatay, ee uu fulaygu goob uu ku dhuunto raadinayey, isagu duhur cad u badheedhay in uu ka muuqdo goobaha ay rag foodda isku dareen, waa sooma-jeeste aan ogaan halka dambe waxa ku xiga, marka ay xaalad dagaal tahay. Hadaba, dhammaan sifooyinkani waa sifooyinkii askariga, marka la joogo goobaha ciidankana, waa sifooyin dhammaantood ammaan mudan, balse marka ay noqoto hogaamin ummaddeed, dhammaan sifooyinkan ammaan laguma mutaysan karo, oo qaarkood ayaa halaag keeni karaba.
,Maantana halkaas ha inoo joogto, waa inoo qaybo kale oo xiiso leh…….
Qalinkii: Maxamed Sharma’arke (Hisoori)
Iftiiminta Araggii Goob-joogga ahaa ee Bandhigii Buugaagta Laas-caanood – Qalinkii: Akram...
Siyaasiyiinta Somaliland Wax ha ka Bartaan Qaabkii loo Xalliyey Xanaftii ka...
Hambalyo Meher Wacan: Maxamed Maxamuud Gahayr iyo Faysa Axmed Faarax
Labadan talaabo hadii la qaado waxay kor u qaadaysa sumcaddii Somaliland
Sharci-jebin: Komishanka Cusub ee Doorashooyinka Lama Marin Dhaartii Saxda ahayd ee...
“Guddoomiye Faysal iyo Boqor Cismaanow Hadalkiinu ma Waafaqsana Dariiqyada Shareecada Islaamka...
Nabsi Jaceyl – W/Q: Faadumo Buuni
Talo ku Socota Xisbiga WADDANI iyo Xukuumadda KULMIYE
Mucaarid-xumaha Maantu Waa Muxaafid-Xumihii Shalay – W/Q: Cabdiraxmaan Cadami
Hambalyo Meher Wacan: Cabdillaahi Axmed Budul Iyo Faysa Nuur Muxumed
Dhibbane Jacayl – Qalinka Faadumo Buuni
Milatariyaynta Ciidanka Booliska: Halis kale oo hor leh
Geeridii Marxuuun Cabdillaahi Fadal Iimaan: Gelbiskii Aaska iyo Galiilyadii Shacbiga
Lafa-gur Sharci: Garyaqaan Yuusuf Biixi Muxumed
Sirta Fartii Masaaridii Hore (Hieroglyphic) & Af-Soomaaliga – Prof. Maxamed Siciid...